बिजय शाही झुट्टै हुन भन्दै मेमोरी किङ्ग मिडियामा ,अर्पन शर्मालाई पनि गरे यस्तो आग्रह (भिडियो सहित) – Ap Nepal
July 25, 2021 1153
पछिल्लो समय “मोमेरी किङ्ग”भनेर चिनिएका वि’जय शाही ले सबै लाई झु’क्याए प’छी हाल सबै तरंगित भएका छन। सबै लाई बिजय लाई नराम्रो सँग झु’क्या’एको रहे छन। हाल १ मिनेटमा ५४ शब्द उल्टो र पाल्टाे याद गरे भने अर्पण शर्मा मिडियामा अाएका थिए। उनले भनेका थिए।
“मैले भारती ना’गरीक न’बल पञ्जियार को रेकर्ड ब्रेक गर्न सफल भए ” तर नबल पञ्जियार नेपाली भएको खुल्न गए पछी अर्पण शर्मा माथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
बिजय शाहि , दुर्गम गाउमा जन्मेका विजय शाहीको प्रतिभा देखेर धेरै मानिसहरु अचम्म परेका थिए। उनको यो शक्ति देखेर धेरै मानिसहरुले विभिन्न प्र’तिक्रिया दिएका थिए। धेरै मिडियाहरुमा विजय शाहीले आफ्नो प्रतिभा देखाएपछि उनि बिबादमा पनि परेका थिए।
नबल पञ्जियार भनेका छन” आधिकारिक रुपमा गीनीज बुकमा मेरो नाम छ र म नेपाली हु। उनले थपे अर्पण शर्मा ले पनि बिजय को जस्तो आफू रेकर्ड होल्डर भनेर झुटाे बो’लेको खुलासा गरे। उनले १ मिनेटमा ५४ बस्तु याद गरेको बिश्व रेकर्ड आफ्नो नाम मा गीनीजको webside मा रहेको तर अर्पण शर्मा को नरहेको, अर्पण लाई प्र’माणित गर्न र अर चु’नाैति दि’देै प्रमाण देखाउन आह्वान गरेका छन।
पछिल्लो समय “मोमेरी किङ्ग”भनेर चिनिएका वि’जय शाही ले सबै लाई झु’क्याए प’छी हाल सबै तरंगित भएका छन। सबै लाई बिजय लाई नराम्रो सँग झु’क्या’एको रहे छन। हाल १ मिनेटमा ५४ शब्द उल्टो र पाल्टाे याद गरे भने अर्पण शर्मा मिडियामा अाएका थिए। उनले भनेका थिए “मैले भारती ना’गरीक न’बल पञ्जियार को रेकर्ड ब्रेक गर्न सफल भए ” तर नबल पञ्जियार नेपाली भएको खुल्न गए पछी अर्पण शर्मा माथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । तर नबलले भने यो सब झुटो भयको दावी गरेका छन्।
नबल पञ्जियार भनेका छन” आधिकारिक रुपमा गीनीज बुकमा मेरो नाम छ र म नेपाली हु। उनले थपे अर्पण शर्मा ले पनि बिजय को जस्तो आफू रेकर्ड होल्डर भनेर झुटाे बो’लेको खुलासा गरे। उनले १ मिनेटमा ५४ बस्तु याद गरेको बिश्व रेकर्ड आफ्नो नाम मा गीनीजको webside मा रहेको तर अर्पण शर्मा को नरहेको, अर्पण लाई प्र’माणित गर्न र अर चु’नाैति दि’देै प्रमाण देखाउन आह्वान गरेका छन
थप सामाग्री तलको भिडियाेमा।
Prevसमयमै उपचार नभए ज्यानै लिने एपेन्डिसाइटिस भनेको कस्तो रोग हो ? कस्ता हुन्छन् यसका लक्षणहरु ? सबैले जानी राखौं
Nextउपत्यकामा २० गतेसम्म निषेधाज्ञा थप, के गर्न पाइन्छ के पाइन्न हेर्नुहोस्
“फुलबुट्टे सारी” गाएकी अफ्रिकी गायिकाले फेरि गाइन अर्को नेपाली गीत, केहि क्षणमै बन्यो भाइरल-हेरौ (भिडियो सहित)